Nanenina ny akamaron'ny olona! | news2dago |
Nanenina Ny Akamaron'ny Olona!
news2dago 09 Martsa, 2009 08:55 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
63% no nomen'Antananarivo an'i Andry Rajoelina t@ fifidianana ben'ny tanana. Nanantena hahita zavatra kanjo??? Zavadoza anefa no nitranga ankehitriny dia ny: Ady, korontana, fiantsina, fampihorohorona, fandrombana sy ny asan-devoly rehetra...
Maro ny programa an'asa nomeny t@ izany eo ohatra ny kianja isakin'ny firaisana 6. Hamboarina ny esplanade etsy analakely asina tsena ambony ambany. Atao kianja mitafo manaram-penitra ny etsy Antsonjombe. sy ny maro hafa koa...Heritaona aty aorina anefa toa ny mifanohitra @ izay no hita. Potika ny tanana tsy misy ho jerena intsony may sy ravarava ny toerana rehetra mba nahafinaritra jerena teto Iarivo... Onena ny tena mahita ny fiainana andavanandro ny olona. Maro moa ny olona mifampiresaka oe ny nenina tokoa tsy eo aloha fa ao aorina handatsa. Anatra ho an'ny manaraka ireny ny oe aza miatsapy @ hazo tsy fantatra.
Zavatra hafa indray ny mahamay azy (Ingahy ben'ny tanàna io) nefa ity tanàna kely ity aza jereo ny nanaovany azy koa raha lasa mpitondra indray ve tsy asa fotsiny indray. Asa aloha fa izay ny hevitrin'ny maro an'isa oe!!! Dia toy izany koa ny hevitrin'ny miaramila sasany manaradia azy. Samy ho tsaraina @ asany avy ny olona tsirairay ka ho hita eo ihany izay tena mety ho tohiny.
Mbola tsy misy vaovao marim-pototra hafa aloa hatreto fa milaza eo ihany raha vantany vao misy.
Manomboka ny fandrombana eny Tanjombato, misy ny 13mai, ary hisy koa ny hetsika ataon'ny mpiaro ny ara-dalàna etsy Mahamasina @ izao ora hanoratako izao daholo izany zavatra izany. @ 12 ora atoandro izao.